सोमबार किन गरिन्छ भगवान शिवको पूजा र व्रत ? जा’न्नुहोस् यस्तो छ कारण : – Sadhaiko Khabar
काठमाडौंमा ३ दिने राष्ट्रिय धर्मसभा र राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै, राजसंस्था पूनःस्थापना गर्ने दा’बी
सोमबार किन गरिन्छ भगवान शिवको पूजा र व्रत ? जा’न्नुहोस् यस्तो छ कारण :
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ०६, २०७८ समय: ७:०६:२०
शिवका लागि समर्पित सोमबारको व्रत सूर्य उदयसँगै सुरु हुन्छ अनि सूर्य अस्ताए पछि सकिन्छ । खाना बेलुकाको आरती सकिएपछि खाइन्छ । दिनमा शिव र पार्वतीको पूजा तथा आराधना गरिन्छ ।
तर कुनै पनि पूजाको अगाडी गणेशको पूजा भने अनिवार्य नै छ ।सोमबारको उपवासले मानिसको इच्छा अनि आकंक्षा पूरा गर्ने विश्वास रहिआएको छ । त्यस्तै ज्ञान प्राप्ति हुन्छ । अविवाहित स्त्रीले असल पति पाउँ भनि सोमबार व्रत बस्ने चलन अझ बढी छ ।
सोमबार व्रत बस्ने चलन कसरी सुरु भयो ?सोमबार शिवको व्रत बस्ने चलनको पछाडी धेरै पौराणिक तथा धार्मिक कथाहरु छन् । यी कथाहरुमध्ये तीन कथाहरु बढी चर्चित छन् ।
पहिलो कथा – एक गरिब ब्राह्मणको बारेमा छ जसले शिवको व्रत पश्चात धन प्राप्त गरेको कथा छ । दोस्रो – एक धनी व्यापारीको छ । जसको छोरा थिएनन् । लामो प्रतिक्षा पछि छोरा जन्मिए तर छोटो समयमै मृ’त्यु हुन पुग्यो ।कथा अनुसार शिव र पार्वतीको कृपाले छोराको पुर्नजन्म भएको थियो । तेस्रो – शिव र पार्वतीले खे’लेको कौ’डा खेलको कथा छ ।
कुनै पनि खालको व्रत वा उपवासले शारीरिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । समय समयमा व्रत बस्नाले शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । व्रतको धारणा परापूर्वकालका ब्राह्मणहरुले ‘ब्राह्मण धर्म’ प्रति मानिसलाई आकर्षित गर्न प्रयोग गर्दथे ।
यसले शारीरिक स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्ने हुँदा व्रत गर्ने स्वयं व्यक्तिले नै अनुभव गर्नसक्ने भएकाले हजारौँ वर्षदेखि यो चलन चलिआएको मानिन्छ ।हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार सोमबार भगवान शिवको विशेष दिन हो । यो दिन देवको पनि देव, महादेव शिवको प्रिय दिन भएकाले महादेवकै व्रत बसी पूजाआजा गरिन्छ ।
कुन राशिका मानिसले कुन भगवानको पुजा गर्नु राम्रो ?
आज बाला चतुर्दशी, किन छरिन्छ मन्दिरमा शतबीज ?